Miyuu Eden Hazard Ku Guuleysan Karaa Ballon d'Or? - Roberto Martinez Ayaa Ka Jawaabay - Gool24.Net
Miyuu Eden Hazard Ku Guuleysan Karaa Ballon d’Or? – Roberto Martinez Ayaa Ka Jawaabay
Tababaraha xulka qaranka Belgium ee Roberto Martinez ayaa sheegay in xiddiga Real Madrid ee Eden Hazard uu wali ku guuleysan karayo abaal-marinta laacibka ugu wanaagsan dunida ee Ballon d’Or, taas oo 12-kii sannadood ee ugu dambeeyey ay 11 ka mid ah qaybsadeen Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi, halka uu Luka Modric soo dhex-galay sannadkii 2018 oo dhamaadkii Koobka Adduunka uu la siiyey.
Eden Hazard oo ka mid ah ciyaartoyda la filayay inay Ronaldo iyo Messi ka beddeli doonaan hanashada Ballon d’Or ayaa sannadkii hore qaaday tallaabadii koowaad ee arrintaas u fududaynaysa kaddib markii uu ku biiray Real Madrid oo ku iibsatay €100 milyan oo Euro, hase yeeshee waxa Santiago Bernabeu uu ugu tegay dhibaato dhaawacyo ah iyo in uu la qabsan waayo kubadda Spain.
15 kulan oo kaliya ayuu xili ciyaareedkan u saftay Real Madrid, inta kalena waxa uu ku maqnaa dhaawac ugu dambayntiina sababay in bishii February uu macasalaameeyo xili ciyaareedka oo qalliin loogu soo sameeyey waddanka Maraykanka, hase yeeshee hakadkii uu kubadda geliyey caabuqa Korona ayaa fursad u noqday oo uu kusoo kabtay, waxaanu hadda diyaar u yahay inuu u dheelo Los Blancos.
Da’diisa sii weynaanaysa ayaa ay dad badan ku doodaan in hadda ay gabaabsi tahay rajadii uu Hazard ugu guuleysan kari lahaa abaal-marinta Ballon d’Or, waxaana qiimaynta kaga sarreeya Kylian Mbappe oo ah midka kusoo daba-shidaya Messi iyo Ronaldo.
Tababare Martinez oo u warramay idaacadda Cadena Ser, ayaa waxa uu dhinaciisa rumaysan yahay in Ballon d’Or ay tahay fursad uu haysto, w axaanu yidhi: “Gebi ahaanba wuxuu ugu guuleysan karayaa abaal-marinta Ballon d’Or kooxda Real Madrid, waana shaki la’aan.”